"Xaqa dayactirka" wuxuu run ka noqon karaa Kaliforniya sidoo kale | Wararka IPhone
Barnaamijka gaboobay wuxuu had iyo jeer ku jiray bushimaha dad badan oo adeegsada tan iyo markii Apple ay ku dhawaaqday inay yareyneyso waxqabadka aaladeeda si kor loogu qaado nolosha batteriga ee aaladaha duugga ah. Erayadanu waxay gaadheen meelihii sarsare, noqoshada dhibaato sii kordheysa ee soo saareyaal badan.
Kalifoorniya waxay dooneysaa inay ku biirto gobollada intiisa kale halkaasoo ay doonayaan inay ka abuuraan sharci u oggolaanaya soo saarayaasha waaweyn isticmaaleyaashu waxay ku hagaajin karaan qalabkooda meel kasta oo ay tixgeliyaan, iyadoon loo baahnayn adeeg rasmi ah illaa inta ay doonayaan inay ka wada hadlaan dammaanadda rasmiga ah ee ay soo bandhigtay soo-saaruhu markay iibsanayaan alaab.
Marka lagu daro Kaliforniya, gobolka ay ku taal xarunta Apple, gobolada Washington, Vermont, New York, Virginia, Massachusetts, Hawaii, Iowa, Kansas, Minnesota, North Carolina, Nebraska, New Hampshire, New Hersey, Oklahoma, Tennessee iyo Missouri waxay rabtaa inay u oggolaato adeegsadayaasha si xor ah u dooro xarunta dayactirka halkaas oo lagu xallinayo dhacdo kasta oo aad ku haysato alaabtaada, iyadoo la ilaalinayo dammaanad-qaadkeeda iyo qaybaha asalka ah.
Haddii biilkani ugu dambeyntii arko iftiinka, Apple waxaa lagu qasbi doonaa oo keliya inuu bixiyo qaybaha asalka u dhigma, laakiin sidoo kale, waxay kaa dooneysaa inaad keento buugaagta dayactirka lagama maarmaanka ah inaad awood u yeelatid inaad ku guuleysatid dayactirka, ayada oo aaladda aan laga dhigin wax aan faa'iido lahayn dhaqanka xun ee aasaaska.
Laakiin Apple ma noqon doonto shirkadda kaliya ee ay arrintan saameyn ku yeelan doonto, maadaama ay noqon laheyd dhamaan soosaarayaasha wax soo saarka elektarooniga ah, kuwa arki lahaa adeegooda farsamo ee rasmiga ah inay joojiyaan inay noqdaan ilo dakhli shirkadda. Haddii aan dhibaato kala kulano badeecada oo uusan daboolin dammaanad qaadka, inbadan ayaa ah dadka isticmaala ee u weeciya xarumo aan rasmi ahayn si ay isugu dayaan inay u dayactiraan alaabtooda, qiimaha sare ee xarumaha rasmiga ah awgood.
Kuwa sameeya tiknoolajiyada waxay sheeganayaan in haddii biilkani arko iftiinka, amniga aaladda ayaa khalkhal gelinaysa, laakiin waxay u muuqataa inaysan ahayn sabab ku filan xuquuqda in si xor ah loo dayactiro aaladaha waxay noqoneysaa sheeko kale. Mashruucan wuxuu ka bilaabmay 2017 12 gobol oo is qoray, halka labadii bilood ee aan joognay 2018, 6 kale la qoray.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Noticias » "Xaqa dayactirka" wuxuu run ahaan ka noqon karaa California sidoo kale
Shaqo-socodka waa la cusbooneysiiyaa iyadoo lagu darayo shaqada maaskaro muuqaal ah